साफ च्याम्पियनसिपः नेपाल पाकिस्तानसँग भिड्दै- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
भाद्र १९, २०७५ हिमेश, कञ्चन अधिकारी
बंगलादेश (ढाका) — दसौं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप मंगलबार बंगलादेशको ढाकामा सुरु हुँदै छ । बंगलादेशको राजधानी ढाकास्थित बंगबन्धु रंगशालामा आज मध्यान्ह स्थानीय समयअनुसार ३ बजेर ४५ मिनेट (नेपाली समय ४ बजे) मा सुरु हुँदै छ ।
सोमबार अभ्यास गर्दै नेपाली फुटबल टिम । तस्बिरः एन्फा
उद्घाटन खेलमा नेपाल र पाकिस्तानबीच खेल हुँदैछ। खेलको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको बंगलादेश फुटबल संघले जनाएको छ। समूह ए र बी मा गरेर जम्मा सात देश सहभागी छन्। समूह ए मा नेपालसहित पकिस्तान, भुटान र बंगलादेश रहेको छ भने बी समूहमा भारत, माल्दिभ्स र श्रीलंका रहेको छ।
आजको दोस्रो खेल पनि ए समूहमै रहेको बंगलादेश र भुटनबीच हुनेछ।
नेपालको अवस्था के छ?
धेरैलाई लागेको छ, सायद यसपल्ट नेपालले केही गर्न सक्छ । यसपल्ट फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्न सकिने हो कि ? प्रतियोगिताको समूह विभाजन हेर्दा कम्तीमा नेपाल सेमिफाइनल पुग्नुपर्ने हो र एकपल्ट सेमिफाइनल पुगेपछि नेपालका लागि फाइनलको ढोका पनि खुल्नुपर्ने हो । सबैलाई थाहा छ, नेपाल अहिलेसम्म फाइनल पुग्न सकेको छैन । अब यसपल्ट भाग्य फेरिने हो कि ?